Wangeela. BNL Website - om05
Waaqayyoo, jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallate.
Yohaannis 3:16 Waaqayyo, akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate; kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee, haa baduuf miti!
Roomaa 3:10 ...Namni qajeelaan hin jiru, lakkii, tokko illee hin jiruu.
Roomaa 3:23 Hundinuu yakkaniiru, ulfinni Waaqayyoos isaanitti hir'ateera.
Ilaa hoolicha Waaqayyoo.
Yohaannis 1:29 Borumtaa Yohannis utuu Yesus gara isaa dhufuu argee, “Ilaa hoolicha Waaqayyoo, isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu”.
Yohaannis 1:36 Yohannis utuu Yesus achiin darbuu ilaalee, “Ilaa hoolicha Waaqayyoo” jedhe.
Yesus isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu
1 Yohaannis 2:2 Inni furee cubbuu keenyaa ti, cubbuu keenya duwwaafis miti cubbuu guutummaa biyya lafaatiifis malee.
Galaatiyaa 1:4 Kristos akka fedha Waaqayyoo abbaa keenyaatti bara hamaa isa si'anaa kana keessaa nu baasuudhaaf jedhee, sababii cubbuu keenyaaf dabarsee of kenne.
Waaqayyo garuu warra du'an keessaa isa kaase.
Roomaa 10:9 TYesus gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo beeksifte, Waaqayyo du'aa akka isa kaase immoo garaa keetti yoo amante fayyina bara baraa in argatta.
Roomaa 6:9 Kristos warra du'an keessaa erga kaafamee, deebi'ee akka hin duune, duunis si'achi isa irratti gooftummaa akka hin qabne beekna.
Hojii Ergamootaa 4:10 namichi amma fayyaa ta'ee isin dura dhaabatu kun, maqaa Yesus Kristos nama Naazireetiin akka fayye, isin hundumti keessan beekaa! Namoonni Israa'el hundinuus kana haa beekan. Isin Yesusin in fanniftan, in ajjeeftanis; Waaqayyo garuu warra du'an keessaa isa kaase.
Gooftaa Yesusitti amani.
Hojii Ergamootaa 16:31 Isaan immoo, "Gooftaa Yesusitti amani, ati in fayyitaa, Maatiin kees in fayyu" jedhanii deebisaniif.
Hojii Ergamootaa 15:11 Nuyi garuu ayyaana gooftaa keenyaa Yesusiin fayyuu keenya in amananna; isaan immoo akkuma kanatti in fayyu" jedheen.
tokko tokkon keessan maqaa Yesus Kristositti
Hojii Ergamootaa 2:38 Phexros immoo, "Yaada garaa keessanii geddaradhaa; cubbuun keessan akka isiniif dhiifamuuf, tokko tokkon keessan maqaa Yesus Kristositti cuuphamaa; kennaa hafuura qulqulluus in fudhattu.
Kennaa hafuura qulqulluus in fudhattu.
Roomaa 8:11 Hafuurri Waaqayyoo inni Yesusin warra du'an keessaa kaase, isin keessa yoo jiraate, inni Kristosin warra du'an keessaa kaase, hafuura isaa isa isin keessa jiraatuun, dhagna keessan isa du'us immoo in jiraachisa.
“Egaa Waaqayyo, Yesus isa isin muka irratti fanniftan kana gooftaadhaa fi Masiihii akka godhe, Israa'eloonni hundinuu utuu hin mamin haa beekan!” jedhe.
Namoonnis kana dhaga'anii garaan isaanii baqaqe; Phexrosii fi ergamoota warra kaaniin, “Yaa oboloota nana maal goonu ree?” jedhan.
Phexros immoo, “Yaada garaa keessanii geddaradhaa; cubbuun keessan akka isiniif dhiifamuuf, tokko tokkon keessan maqaa Yesus Kristositti cuuphamaa; kennaa Hafuura Qulqulluus in fudhattu.
Abdiin Waaqayyo abdachiise isinii fi ijoollee keessaniif, warra fagaatanii jiraataniif, Waaqayyo keenya gooftichi itti waamu hundumaafis” jedhee deebiseef.
Hojii Ergamootaa 2:36-39
(PDF English) - Mt Sunset.